Gipsy ပါ။ - MYSTERY ZILLION
မူလ › Member ဆိုင်ရာ › Intro Myself ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
Gipsy June 2008 edited June 2008 in Intro Myself မင်္ဂလာပါခင်ဗျား။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟိုဒီဒီလိုက်စမ်းနေတဲ့ကောင်လေးပါ။Blog လေးရေးထားပါတယ်။ လာလည်ကျပါခင်ဗျား။လိပ်စာကတော့(လိပ်ဆိုသောအကောင်ရဲ့အစာမဟုတ်ပါဘူး)Address ----- http://gipsypyaesone.blogspot.comပါ။လာလည်လို့မရတာကတော့အသေအချာပါပဲAcess is denied လို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ မှတ်ချက်များ
zawmyotun June 2008 edited June 2008 Registered Users ကျွန်တော်.နာမည်ဇော်မျိုးထွန်းပါလမ်း30မှာနေပါတဃ်အဖေကတော. အဲမှားလို.ဇော်မျိုးထွန်းပါဗျို..............:d á€±á€á€šá€¶ June 2008 edited June 2008 Registered Users မင်္ဂလာဆောင်ပါ...အဲလေဟုတ်ပါဘူး..မင်္ဂလာပါခင်ပGipsy နဲ့ဇော်မျိုးထွန်း MZ မှ ကြိ ုဆိုပါတယ်....... computer__crazy June 2008 edited June 2008 Registered Users [quote=gipsy;7763]မင်္ဂလာပါခင်ဗျား။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟိုဒီဒီလိုက်စမ်းနေတဲ့ကောင်လေးပါ။Blog လေးရေးထားပါတယ်။ လာလည်ကျပါခင်ဗျား။လိပ်စာကတော့(လိပ်ဆိုသောအကောင်ရဲ့အစာမဟုတ်ပါဘူး)Address ----- http://gipsypyaesone.blogspot.comပါ။လာလည်လို့မရတာကတော့အသေအချာပါပဲAcess Is Denied လို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဂျစ်ပစီတွေလိုမရပ်မနား ခရီးနှင်နေ.... :65: မိုက်ဒလယ်ကွာ .. အိုင်ဒီကတော့ အပျံစားပဲ... ဟိုလူကြီးအိုင်ဒီနဲ့တော့ ကွာပ... :dစီခရေဇီ computer__crazy June 2008 edited June 2008 Registered Users [quote=zawmyotun;7772]ကျွန်တော်.နာမည်ဇော်မျိုးထွန်းပါလမ်း30မှာနေပါတဃ်အဖေကတော. အဲမှားလို.ဇော်မျိုးထွန်းပါဗျို..............:d Mz မြို့တော်မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏ :6:စီခရေဇီ bhope June 2008 edited June 2008 Registered Users အားလုံးကို ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ...:6::6::6:အနော်လဲစ၀င်ကာစက မွေးကင်းစလေးပေါ့။အခုတော့ လေးဖက်ထောက်နေပြီတဲ့။အတိုကြီးတွေကြောတာပဲ။အနော်လဲသိ၀ူး။ ko-edit June 2008 edited June 2008 Registered Users [quote=Gipsy;7763]မင်္ဂလာပါခင်ဗျား။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟိုဒီဒီလိုက်စမ်းနေတဲ့ကောင်လေးပါ။Blog လေးရေးထားပါတယ်။ လာလည်ကျပါခင်ဗျား။လိပ်စာကတော့(လိပ်ဆိုသောအကောင်ရဲ့အစာမဟုတ်ပါဘူး)Address ----- http://gipsypyaesone.blogspot.comပါ။လာလည်လို့မရတာကတော့အသေအချာပါပဲAcess is denied လို့ပေါ်လာလိမ့်မယ်။mz က၀ဲလ်ကမ်းပါ..ကိုဂျပ်ပစီရေ:6:ဘလော ့က Acess denied လား....ကျနော်ခုလေးတင်၀င်ကြည် ့တာရပါတယ်....ကာတွန်းတွေထဲမှာတော ့ခလေးငယ်တွေကိုဘယ်လို (တိတ်ကဲ)လုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုတော ့သဘောကြပေါ ့ဗျာ:103:ko-edit MrDBA June 2008 edited June 2008 Administrators မင်္ဂလာပါ .. ကြိုဆိုပါတယ် ... ဘလောက်ကတော့ အရေးကောင်းဘဲဗျနော့ ဆက်လုပ်ဗျို့ ညမီးအိမ် June 2008 edited June 2008 Registered Users, Moderators ဘလောခ်လေးကိုရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Gtalk အတိုကောက်လေးတွေအခုမှသိတော့တယ် ကျေးဇူးပါ။MZ မှလဲကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ သိထားတာလေးတွေေ၀မျှခဲ့ပါဦးနော်။ sithu015 June 2008 edited June 2008 Administrators ကြိုဆိုပါ့ဗျာ။ စည်သူအောင်(mz) mgminnyo June 2008 edited June 2008 Registered Users Gipsy နဲ့ဇော်မျိုးထွန်း ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ..မသိတာရှိလည်း ဒီကအကိုတွေ၊အမတွေကိုမေးနိုင်ပါတယ်..ကျွန်တော်ကတော့ ဘာမှမတတ်ဘူး..:1:ဘလော့လေးလည်းရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကောင်းတယ်။ဆက်လုပ်.. exiter June 2008 edited June 2008 Administrators Warmly Welcome.....:6::6::6: ဒီဆွေးနွေးချက် ကို ပိတ်ထား ပြီးပါပြီ။